Uhlala Phi UMtyholi? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikamba IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKorea IsiKyangonde IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMapudungun IsiMoore IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNyungwe IsiNzema IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Uhlala Phi UMtyholi?
Njengesidalwa somoya, indawo ahlala kuyo uMtyholi ayinakubonwa ngabantu. Noko ke, le ndawo ayisosihogo somlilo apho angcungcuthekisa abantu abangendawo, njengoko kuboniswa kumfanekiso okweli nqaku.
“Kwabakho imfazwe ezulwini”
Kangangexesha elithile, uSathana uMtyholi wayehambahamba kummandla wokomoya nanini na ethanda, ade angene nasezulwini apho akhoyo uThixo neengelosi ezithembekileyo. (Yobhi 1:6) Kodwa iBhayibhile yachaza kwangaphambili ukuba kwakuza kubakho “imfazwe ezulwini” apho uSathana wayeza ‘kuphoselwa emhlabeni.’ (ISityhilelo 12:7-9) Ubalo-maxesha lweBhayibhile kunye neziganeko zehlabathi ziyangqina ukuba le mfazwe yasezulwini sele yenzekile. Ngoku uMtyholi usemhlabeni.
Ngaba le nto ithetha ukuba kukho ilizwe aph’ emhlabeni ahlala kulo uMtyholi? Ngokomzekelo, kuthiwa “itrone kaSathana nalapho ahleli khona” ikwisixeko samandulo iPergamo. (ISityhilelo 2:13) Kusenokwenzeka ukuba le vesi ibhekisela kwindawo apho uSathana wayenqulwa kakhulu khona. IBhayibhile ithi uMtyholi ulawula “zonke izikumkani zomhlaba,” ngoko akukho lizwe lithile ahlala kulo emhlabeni kodwa uhamba iindawo zonke.—Luka 4:5, 6.
Okwenzeka Emazulwini Imibuzo YeBhayibhile Iyaphendulwa
Ngaba abantu abangalunganga bohlwaywa esihogweni somlilo? Ngaba isihogo sisohlwayo sesono? Funda iimpendulo ezisuka eBhayibhileni zale mibuzo.
Ngaba UThixo Wadala USathana Ukuze Asivavanye?
Ngaba UMtyholi Uyakwazi Ukulawula Abantu?